Sideed Ku Tageysaa Xaqiijinta Koontada 'Instagram'? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo xaqiijiyaa koontada 'Instagram'?
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 395
Xaqiijinta xisaabaadka Instagram Waxay noo oggolaaneysaa inaan ogaano haddii koontada dadka qaarkood ay run tahay ama ay been tahay, hadda tiro aad u tiro badan oo xog been abuur ah ayaa lagu arkay shabakadaha bulshada. Qaar badan oo kuwaas ka mid ah ayaa loo abuuray si loo yaso dadka qaarkood.
Xaaladaha kale, ujeedo ah khiyaamo iyadoo la adeegsanayo magacyada dadka kale. Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu adag ee dadka caadiga ah ay u ogaadaan, ma ahan in qof kastaa uu leeyahay aragti uu ku xaqiijin karo macluumaadka naloo siiyay sababtoo ah waxaan ku kalsoonahay qofka nala soo xiriiraya maxaa yeelay isagu ama iyadu waa "qof lagu kalsoon yahay" annaga.
Sababta ugu weyn ee loo xaqiijiyo koontada 'Instagram' waa ta aan horey kuugu sheegnay, iska ilaali khayaanada dadka xun iyaga oo ka wakiil ah dadka caanka ah ee suurtogalka ah ama, haddii taa la waayo, dhinacyada saddexaad ay abuuraan ama been abuur been abuur ah si uun ama qaab kale isugu dayaan inay waxyeello u geystaan, qofka ay iska dhigayaan iyo qofka ay la xiriiraan labadaba.
Qodobkan buluugga ah ee u muuqda bar-xisaabeedka 'Instagram' ayaa ah habka dalabka ee noo sheegaya in qofka shaqsigiisa horay loo xaqiijiyay oo ay nabdoon tahay in la raaco ama, haddii taas la waayo, laga aqbalo kuwa raacsan. Badanaa noocan ah calaamada buluuga ah waxaa la siiyaa dumarka dad caan ah ama fanaaniin Ama garoonka dhexdiisa taasi waa, isboorti, siyaasad, dhaqan, farshaxan, muusig.
In kasta oo xaqiijinta ugu dambeysa ay tahay nidaam uu fulin karo oo kaliya milkiilaha koontada, waxaa jira dhowr arrimood oo kuu sheegaya in xisaabaadka ay been yihiin iyo in kale, iyo kuwa ku saleysan barta 'Instagram' marka la baarayo xisaabaadka:
Maareynta ka socota koontada Instagram.
Jidka taas buuxa foomamka xaqiijinta.
Haa way jiraan xisaabaadka kale waxay isku dayayaan inay xadaan aqoonsigaaga.
Marka laga hadlayo shirkadaha haddii aad leedahay xisaab ganacsiga lagu xaqiijiyay Facebook.
Tallaabooyinka la raaco:
Soo gal Instagram-kaaga taleefankaaga gacanta, sida caadiga ah magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah.
Marka gudaha aado dejinta koontada, oo lagu muujiyey seddex xariiq oo jiifa, qeybta kore ee midig ee shaashadda arjiga.
Mar hadday kala baxaan dhammaan xulashooyinka ku jira qaybtaan, xulo cadeynta codsiga.
Nidaamka ayaa ku weydiin doona macluumaad cayiman taas oo u dhiganta macluumaadkaaga shakhsiyeed, waa inaad si sax ah uga jawaabtaa.
Si la mid ah, waxay ku weydiin doontaa inaad doorato nooca koontada aad haysato iyo inaad ku lifaaqdo caddeynta dukumiintiyada aqoonsiga ee u dhigma waddankaaga ama, haddii ay taasi dhacdo, Baasaboor kaas oo xoogaa caalami ah.
Haddii ay dhacdo in koontadaadu ganacsi tahay waxaad ku soo lifaaqi doontaa bayaanka cashuurta dakhliga, caddeyn bixinta lacag bixinta adeegga dadweynaha halka magaca shirkaddu ka muuqato, ama ku guuldareysato taas, xaaladda shirkadda.
1 Sababaha xaqiijinta:
3 Tallaabooyinka la raaco:
Noocyo kala duwan oo ku yaal barta Instagram
Sidee loo abuuraa koonto Pinterest si guul leh?